kuroky – Gaming Noodle
Kuroky နဲ့ Miracle တို့ရဲ့ အသင်းသစ် Nigma Esports
[Unicode] Kuroky နဲ့ Miracle တို့ရဲ့ အသင်းသစ် Nigma Esports Team Liquid ကနေ စက်တင်ဘာလက ထွက်ခွာလာတဲ့ Kuroky နဲ့ အပေါင်းပါ တစ်သိုက်ကတော့ Nigma Esports နာမည်နဲ့ အသင်းသစ်ကို ဖွဲ့စည်းလိုက်ပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ လူအများစု ထင်ကြေးပေးခဲ့ကြသလို နာမည်ကြီး Esports အသင်းတွေကို ရောက်ရှိသွားတာမဟုတ်ပဲ ကစားသမား (၅) ဦးပေါင်းပြီး ကိုယ်ပိုင်အမှတ်တံဆိပ်အသစ်နဲ့ အသင်းသစ် တည်ထောင်လိုက်တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Nigma Esports 1. Miracle- 2. w33 3. MinD_ContRoL 4. GH 5. KuroKy ကစားသမားတွေကတော့ အားလုံး အကျွမ်းဝင်ပြီးသားဖြစ်လို့ ထွေထွေထူးထူး မိတ်ဆက်ပေးစရာ မလိုတဲ့ …
Kuroky နဲ့ Miracle တို့ရဲ့ အသင်းသစ် Nigma Esports Read More »
[Unicode] မကြာခင် အသင်းသစ်ကို ကြေညာတော့မယ့် Team Liquid ကစားသမား ဟောင်းများ Dota2 ပရိသတ်တွေ မျှော်လင့်နေကြတဲ့ Team Liquid ကစားသမားဟောင်းတွေဖြစ်တဲ့ Miracle, Kuroky, Mind Control, GH နဲ့ W33 တို့ (၅) ယောက် ရဲ့ အနာဂတ်အစီအစဉ်တွေကို Kuroky က ထုတ်ဖော် ပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်။ Team Liquid ရဲ့ Captain ဟောင်းတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Kuroky ဟာ မနေ့ညက ESL One Hamburg မှာ Gambit ကို အနိုင်ရပြီး ဗိုလ်စွဲသွားတဲ့ TNC ကို Twitter ပေါ်မှာ ဂုဏ်ပြုစကားဆိုခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် တကမ္ဘာလုံး စိတ်ဝင်စားနေတဲ့ …
မကြာခင် အသင်းသစ်ကို ကြေညာတော့မယ့် Team Liquid ကစားသမား ဟောင်းများ Read More »